नेपालमाथि हमला गर्न सक्ने हिम्मत संसारमा कसैको छैन- भारतिय चर्चित लेखिका « Npnews
March 21, 2018 Wed
नेपालमाथि हमला गर्न सक्ने हिम्मत संसारमा कसैको छैन- भारतिय चर्चित लेखिका
काठमाडौ । गोरखालीहरू नेपालको सैनिक सेवामा मात्र संलग्न हुन्छन् भन्नु उनीहरूलाई कम आँकलन गर्नु हो । नेपालमा हमला गर्ने हिम्मत आज पनि कसैमा छैन भने त्यसको एक मात्र कारण गोरखालीहरूको छवि नै हो । उनीहरू सभ्य र निडर हुन्छन् । जो केवल नेपाली सेनामा मात्र सेवा गर्दैनन्, अपितु बेलायती तथा भारतीय सेनाका लागि पनि मर्न तत्पर रहन्छन् । आज होइन, सन् १८१४–१६ को नेपाल–अंग्रेज युद्धको अन्त्यदेखि नै यो परम्परा चलिआएको छ । विकट परिस्थिति तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि उनीहरू आफ्नो असाधारण वीरता र नायकत्व प्रदर्शन गर्न सक्छन् ।
आफ्नो यो परम्परामा विश्वास राख्ने एक गोरखा सैनिक दीपप्रसाद पुनले अफ्गानिस्तानको एउटा मोर्चामा एक्लैले एउटा पोष्टमा ३० जना तालीबानी लडाकुलाई मात ख्वाइदिएका थिए । यो घटना अफगानीस्तानको हेल्मन्ड प्रान्तमा सेप्टेम्बर २०१० को एक साँझ घटेको थियो । गोरखा राइफल्सका हवल्दार दीपप्रसाद पुन चौकीको दोस्रो तल्लामा तैनाथ थिए । त्यही बेला उनले केही हलचल सुने । ध्यानपूर्वक हेर्दा त्यहाँ सडकमा विद्रोहीहरू विस्फोटक ९इम्प्रोभाइज एक्सप्लोसिभ डिभाइस अर्थात् आईईडी० पदार्थ राख्ने प्रयास गरिरहेका थिए ।
पुनलाई बुझ्न गार्‍हो भएन कि उनी चारैतिरबाट घेरिइसकेका छन् तसर्थ उनले हार नमानी युद्धमा डट्ने निर्णय गरे । त्यो रात त्यहाँको आकाश गोली र रकेट प्रोपेड ग्रेनेड ९आरपीजी० फायरले गुञ्जायमान थियो । पुन तैनाथ चौकीलाई हानी पुर्‍याउने पूरा योजनाका साथ तालिबानी लडाकुहरूले उक्त हमला गरेका थिए ।
यद्धपि पुन आत्तिएनन्, बरु पुरा जोस र हिम्मतका साथ मसिनगन उठाए, ट्राइपोड लगाए अनि त्यसपछि आँखा चिम्लेर अन्धाधुन्ध गोली बर्साउन थाले । पुनले आक्रमणकारीहरूलाई सम्हालिने अवसर पनि दिएनन् । पुनले १७ वटा ग्रेनेडले शत्रुहरूमाथि आक्रमण गरे । ग्रेनेड सकिएपछि एसए ८० सर्भिस राइफलले दनादन गोली बर्साए । यहाँसम्म कि उनी शत्रुहरूमाथि बारुदी सुरुङ फ्याँक्नसमेत हिचकिचाएनन् ।
उक्त घटना स्मरण गर्दै पुन भन्छन्— ‘एक तालीबानी लडाकू गार्ड हाउससंग टाँसिएको टावर चढ्ने प्रयास गरिरहेको थियो । मैले तत्काल उसलाई जमिनमा खसाल्नु थियो ।
मैले उसलाई त्यहाँबाट हटाउन सफलता त हासिल गरें तर हतियारले मलाई ऐन मौकामा धोका दिएको थियो, त्यतिबेला राइफल चलेन । मैले मसिनगनको ट्राइपड उठाएर त्यो तालिबानीको टाउकोमा प्रहार गरें, त्यसपछि ऊ जमिनमा ढल्यो ।’
पुन तालिबानीहरूसँग तबसम्म भिँडिरहे, जबसम्म थप सैनिक सहायता उनको चौकीसम्म आइपुगेन । थप सहयोग त्यहाँ पुग्दासम्म पुन एक्लैले ३० जना तालिबानीलाई सिध्याइसकेका थिए । हिजोआज पुन जब उक्त घटना विवरण सुनाउन थाल्छन्, त्यतिबेला उनका शब्दले भन्दा आँखाले धेरै कुरा भनिरहेका हुन्छन् ।
पुनलाई उक्त बहादुरीका लागि बेलायतकी महारानी एलिजावेथ द्वितीयाले बकिङघम प्यालेसमा आयोजित एक समारोहका बीच ‘कक्सपिक्युअस ग्यालेन्ट्री क्रस’ पदकले सम्मानित गरेकी थिइन् ।
उक्त समारोहमा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दै पुनले भनेका थिए— ‘त्यति बेला म निराश थिइनँ, किनभने मसित आफू बाँच्नका लागि लड्नुको विकल्प थिएन ।
तालिबानीहरूले चारैतिरबाट त्यो चेकप्वाइन्टलाई घेरिसकेका थिए र म त्यहाँ एक्लै थिएँ । जसरी उनीहरूले मलाई घेरेका थिए, त्यस्तो स्थितिमा मेरो मृत्यु निश्चित थियो ।
हजुरबुवाको साथमा दीपप्रसाद पुन
त्यतिबेला मैले सोचें मर्नुअघि जति बढिलाई मार्न सक्छु, त्यति शत्रुलाई मारेर मात्र म आफू मर्छु ।’ पछि थाहा भयो कि पुनले त्यतिबेला २ सय ५० मेसिनगन तथा १ सय ८० एसए ८० राउन्ड फायर गरेका थिए भने ६ वटा फस्फोरस ग्रिनेड, ६ वटा नर्मल ग्रिनेड अनि एउटा क्लेमोर माइन फ्याँकेका थिए ।
पुनको परिवार पुस्तौंदेखि ब्रिटिस गोरखा रेजिमेन्टमा सेवारत छ । पुनका पिता पनि गोरखा राइफलमै कार्यरत थिए भने उनका हजुरबुवा द्वितिय विश्वयुद्धताका बर्माको मोर्चामा देखाएको अदम्य साहसका लागि भिक्टोरिया क्रसबाट सम्मानित भएका थिए ।
साप्ताहिक अनलाइन संस्करण (इन्डिया संवादका लागि सुष्माश्रीको आलेखको भावानुवाद) / राईडल नेपालबाट
आखा अगाडी धुवामा त उडेर गए हाम्रो मुटुहरु, अब हामीलाई लास त देउ मुक्ती दिनलाई [भिडियो हेर्नुहोस]
चारपाँच दिनदेखि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज धाइरहेका हरिशरण पौडेललाई अहिले न दिन न रात सबै एउटै जस्तै छ । निन्याउरो अनुहार,
सम्मान पाउँदा धुर्मुसको आँखामा आँसु…(भिडियो)
काठमाडौँ – नेपाली कलाकारीताको, हाँस्य व्यंङ्ग्य क्षेत्रका चर्चित एवं सफल व्यक्तित्व तथा पछिल्लो समयका सामाजिक अभियान्ता सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) लाई
पाइलटले यात्रुलाई कहिल्यै नभन्ने ५ कुरा !!! ख्याल गर्नुस [भिडियो हेर्नुहोस ]
विमानमा यात्रा गर्दा कुरा केही यस्ता कुरा हुन्छन् जो पाइलट यात्रुलाई कहिल्यै बताउँदैनन्। जब तपाई विमानमा सवार हुनुहुन्छ, पाइलट तथा
एउटा अधुरो कथा बनिन पृथुला,पृथुला विमानचालक बन्ने कुरा उनका बुवा-आमालाई मन परेको थिएन [भिडियो हेर्नुहोस ]
पच्चीस वर्षीया पृथुला रशिदका लागि सह-चालकका रूपमा त्यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडान थियो। उनले आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि काठमाण्डूमै गरेकी
सन्जिदा हक र उनका पति रफिक जमान दुवै कामकाजी व्यक्ति हुन् । महीनौंसम्म काम गरेर बोर भएका उनीहरूले विदेशमा छुट्टी
विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकी ‘एन्जिला’,जस्लाई दुर्भाग्यले लगेको थियो बङ्गलादेश,[हेर्नुहोस भिडियो ]
बंगलादेशको सिलोटस्थित जलालावाद राजीव राबिया मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटलमा एमबीबीएस सकेर इन्टर्न गरिरहेका निरोज डंगोलका कलेजका साथी हुन् एन्जिला श्रेष्ठ
बेश्यालयमा आएका ग्राहकले युवतीलाई आमा बन्न आग्रह गरेपछि...
दिपकराज गिरिले आफ्नी छोरीको विवाहकै दिन लेखे अहिले सम्मकै भावुक स्टाटस !
प्रकाश पुत्र वियोगको पिडा सेलाउदै गर्दा फेरी प्रचण्डमाथी अर्को थप पिडा…..
सम्मान पाउँदा धुर्मुसको आँखामा आँसु...(भिडियो)
सारै दुब्लो हुनुहुन्छ ? कसरी मोटाउने भनेर चिन्तामा हुनुहुन्छ भने अब घरमै बसेर यसो गर्नुहोस दिनको १ केजी वजन बढाउने घरेलु उपाय (टिप्स भिडियो)
विवाहपछि चम्किन्छ, यो राशी हुने मान्छेको भाग्य-जानी राखौँ (भिडियो सहित)
हे भगवान ! बिरगंजमा यो के भयो यस्तो! हेर्दा हेर्दै २ जना खायो आगोले (भिडियो सहित)
पृथुलाको पहिलो नेपाल फ्लाइट नै बन्यो अन्तिम, नेपाल आएर अग्ला हिमाल हेर्ने उनको सपना अधुरै (भिडियो)
एउटै जिल्लाका महिला राष्ट्रपतिमा भिड्दै, बिद्या भण्डारीलाई टक्कर दिने कुमारी राई को हुन् ? (भिडियो)
आज शनि र मंगलको महायोग: यी राशी हुनेहरुलाई हुन सक्छ खतरा [भिडियो हेर्नुहोस ]